Bilaogy 6 Amin’ny Teny Anglisy Manampy Anao Hahafantatra Tsara Kokoa An’i Japana · Global Voices teny Malagasy
Bilaogy 6 Amin'ny Teny Anglisy Manampy Anao Hahafantatra Tsara Kokoa An'i Japana
Voadika ny 04 Oktobra 2014 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Swahili, русский, English
Sary avy amin'ilay mpisera Flickr, Taro Yamamoto. CC BY-NC-SA 2.0
Raha oharina tamin'ny folo taona lasa izay, talohan'ny Facebook, Twitter ary ny media sosialy hafa, tsy mbola betsaka ny bilaogy Japana azo nampiasaina.
Mbola misy ireo vato sarobidy tafajanona. Raha liana hahafantatra bebe kokoa momba an'i Japana ianao, sehatra tsara indrindra hanombohana izany ireto bilaogy ireto izay mpila ravinahitra manam-pahaizana no nanoratra ny maro amin'izy ireo.
Tsy bilaogy fotsiny ihany, sampam-pahalalam-baovao tsy miankina ny Shingetsu izay ahitana vaovao farany sy fanadihadiana ny zava-mitranga ankehitriny ao Japàna. Tantanin'ilay mpanoratra gazety Michael Penn, mpandray anjara matetika amin'ny Al-Jazeera, fomba tsara anarahana izay vaovao farany ao Japàna ny sioka ao amin'ny SNA Twitter
Raha te-hahafantatra tsara ny politika Japoney ianao, sehatra tsara hanombohana izany ny Shisaku.
Nosoratan'ilay mpikaroka ambony sy mpaneho hevitra Michael Cucek, mponina ao amin'ny Distrikan'ny Renivohitra Tokyo nanomboka tamin'ny taona 1994, miezaka mamantatra ireo olona ambony sy antoko mampatanjaka ny politika Japoney ny bilaogy Shisaku, ary matetika manome vaovao manesoeso momba ireo zava-mitranga ankehitriny.
Sehatra tsara hanombohana ity lahatsoratra bilaogy ity izay mamaritra ireo hadalàna ambadiky ny mpanohana ny mpihaza trozona ao Japana.
Mamelona indray izay navelan'ilay goavana efa voarara ankehitriiny, Tokyo Confidential, manome topi-maso ara-potoana ireo tantara mahatalanjona momba ireo tantara manaitra sy manafintohina maharikoriko isan-kerinandro ao Japana ny Tokyo Reporter.
Feno resaka marobe momba ny firaisana ara-nofo, sy momba ny herisetra vitsivitsy, ahitana tantara mahaliana izay tsy hita amin'ny fampahalalam-baovao vahiny mitatitra momba an'i Japàna, tahaka ny lehilahy manao palitao Godzilla ity bilaogy ity.
Tantanin'i Jake Adelstein, mpanoratra gazety mpanao fanadihadiana izay mitatitra momba ny heloka ao Tokyo ao amin'ireo gazety mpivoaka isan'andro amin'ny teny Japoney, ny Japan Subculture Research no toerana tianao haleha hahazoana ireo tsaho farany sy vaovao ao anatin'ny mafia, ny politika maloto, voakolikoly ary ny “endrika maintin'ny Masoandro Miposaka”
Tsara vakiana ny bokin'i Adelstein Tokyo Vice, ahitana tsaho izay hivadika sarimiaina atsy ho atsy.
Mpanakanto miha-malaza eo amin'ny tontolon'ny bilaogy amin'ny teny anglisy ao Japana, manome sary mahafinaritra sy fanehoan-kevitra mahaliana momba ny kolontsaina pop Japoney ny Tofugu.
Iray amin'ireo tantaran'ny Tofugu mahaliana indrindra vao haingana ny resadresaka mitohy miaraka amin'i Medama-sensei ao amin'ny YouTube sy ny media sosialy.
Mianatra ao amin'ny monastera Zen iray ankehitriny, sady mahazo fankasitrahana no mahazo fiampangana i Medama-sensei noho ny seho notontosainy tamin'ny Youtube miresaka fanavakavahana nandritra ny fitoerany amin'ny maha-mpampianatra anglisy azy tao amin'ny lisea iray ao Okinawa.
Manana zavatra hanampiana ity lisitra ity? Ampahafantaro anay ao anatin'ny fanehoan-kevitra izany!
18 ora izayIndonezia